Makorari emakemikari Vagadziri & vanotengesa - China Makorari Makemikari Fekitori
Sanding Disc Horo Goridhe Sanding bepa rePolishing ...
Wholesale Green Firimu Hasha Turu Disc Sandpaper -L911
Disposable Painting pfuti mukombe
Square Sandpaper Sheet reRandom Orbital Sander-A720T
Yakanakisa Kutengesa Multifunction Yekukurumidza Wax Mota Kukwesha-XYS-A2
XYS-A2 Kubvarura Chikamu
XYS-A2 Wakisi Inokurumidza chibereko chinoisa wakisi yakaoma uye girazi wakisi. Iyo inogona kukurumidza uye nenzira inobudirira kubvisa iyo sandpaper mamaki akasara mushure mejecha P1500-P2000 sandpaper uye kuzadzisa girazi maitiro. Yakakwira-yevasungwa, yepamusoro-yekucheka emulsion-senge mafomati ari "one-nhanho kupora," kumhanya kwazvo, kumhanya kwakanyanya, uye kwakakwirira kubwinya.
CHAPA ZVAKANAKA ZVAKANETSA KUCHENGA POLISI YEMAHARA YEMOTO FAST POLISH-XYS-CY0815
Ichi chigadzirwa inyanzvi pendi inoomesa mumiriri inoshandiswa pamushini wekumonyorodza ine kumhanya kutenderera kwe1400-2000 rpm. Iyo inogona kunyatso bvisa mamaki ejecha eP1000-P1200 sandpaper uye kumwe kukomba kwakakomba uye zvakakomba oxide matete. Kana uchishandisa XYS CY-0187 Yakanaka Kupukuta Wax, mhedzisiro iri nani!
Mota Kuchengeta Makoroni Kompuru yemahara samples-XYS-CY0816
Ichi chigadzirwa inyanzvi pendi inoomesa mumiriri inoshandiswa pamushini wekumonyorodza ine kumhanya kutenderera kwe1400-2000 rpm. Iyo inogona kunyatso bvisa mamaki ejecha eP1200 uye yakanaka sandpaper. Kana uchishandisa XYS CY-0818 girazi rekurapa mumiriri, mhedzisiro iri nani!
Simbi yekumeta Compound yeBuffing mavhiri-XYS-CY0817
Iyo inyanzvi yemotokari pendi yekupukuta inoshandiswa pamushini wekupukuta ine kumhanya kwe1000-2000 rpm. Iyo inogona kunyatso bvisa mamaki ejecha eP1500 uye yakanaka sandpaper, pamwe nekubvisa zvimwe zvakanaka kukwenya, kukanganisa, uye oxide matete!
XYS Professional zvemaziso makorari mumiririri-CY0818
Ichi chigadzirwa inyanzvi yemotokari girazi rinopedzisa mumiririri rinoshandiswa pamushini wekumonyorodza ine kumhanya kutenderera kwe1200-2000 rpm. Inogona kukurumidza uye zvinobudirira kubvisa ese marudzi emota pendi kupora mhete mamaki, kuti uwane yakanakisa yepamusoro-gloss girazi maitiro!